OpenStreetMap mila ny fanampianao mba hanohizany ny fahaleovan-tena | Avy amin'ny Linux
Ny ankamaroan'ny tetik'asa rindrambaiko malalaka dia tohanan'ny fanomezana sy ny mpanohana azy, tsy miafina amin'ny olona ny fandaniana ateraky ny fivoaran'ny rindrambaiko, amin'ity sakaizany ity, ny sakaizan'ny OpenStreetMap nanomboka fanentanana fanomezana, tanjona ny hampiakatra 70.000 € izany dia hahafahan'ilay tetikasa hijanona tsy miankina.
Ny fizotran'ny fanomezana dia mandroso ary izao ihany 8.000 € Mba hahatratrarana ny tanjony dia manasa ny vondrom-piarahamonina iray manontolo izahay handray anjara amin'ity tanjona ambony ity, izay tsy isalasalana fa ho hitazona hatrany ny fitazonana tsara indrindra hamoronana sarintany maimaimpoana sy azo ovaina.
1 Inona ny OpenStreetMap?
2 Inona ny OpenStreetMap Foundation?
3 Ahoana ny fomba fanomezana ho an'ny tetikasa OpenStreetMap?
4 Inona no hataon'izy ireo amin'ny fanomezana?
Inona ny OpenStreetMap?
OpenStreetMap Io no angon-drakitra jeografika misokatra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, tetikasa iray tompon'andraikitra amin'ny famoronana sy fanovana malalaka ny sari-tany. Ireo sarintany dia noforonina niorina tamin'ny fampahalalana ara-jeografika nalefan'ny fitaovan'ny mpampiasa (GPS, orthophotographs, ankoatry ny hafa), nohazakaina sy notahirizina tamina tahiry matevina.
Manana andraikitra lehibe amin'ity tetikasa ity ny vondrom-piarahamonina, satria izy ireo no miandraikitra ny fanovana, fanavaozana, fampidirana vaovao ary fanamarinana bibikely ao amin'ny sari-tany. Ny fitaovana dia adika amin'ny fiteny maro be ary ampidirina amina fitaovana maimaimpoana tsy tambo isaina.
Inona ny OpenStreetMap Foundation?
La OpenStreetMap Foundation Nohamafisin'ny OSM tamin'ny 22 aogositra 2006 teo am-pelatanan'ny Mpitondra azy io SteveCoast, ary izao ny famaritana azy
Mitanisa ny Fototra:
"Ny OpenStreetMap Foundation dia fikambanana iraisam-pirenena tsy mitady tombom-barotra natokana ho amin'ny fampiroboroboana ny fitomboana, ny fampandrosoana ary ny fizarana data geospatial maimaimpoana ary ny fanomezana angon-drakitra geospatial ho an'ny rehetra hampiasa sy hizara."
La OpenStreetMap Foundation mifototra amin'ny fidiram-bola avy amin'ny anjaran'ny mpikambana sy ny orinasa, ny vola azo avy amin'ny kaonferansa isan-taona, ary ny fandefasana fanomezana taloha.
Ahoana ny fomba fanomezana ho an'ny tetikasa OpenStreetMap?
Ny OpenStreetMap Foundation dia namorona famoahana Eto, izay manondro ny antony mahatonga ny fanomezana, ny habaka ary ny fomba fanomezana. Paypal dia ampiasaina hanodinana fanomezana, iray amin'ireo vavahady fandoavam-bola be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.
Raha tsy afaka mampiasa Paypal ianao dia azonao atao ny manoratra amin'ny ekipa mpamatsy vola amin'ny board@osmfoundation.org
Toy izany koa, manazava ny fototra:
Inona no hataon'izy ireo amin'ny fanomezana?
Ireo fanomezana dia handoavana ny vola lany amin'ny tetik'asa OpenStreetMap:
Sarany amin'ny hardware
Mpanampy amin'ny fitantanana
Ny fandaniana hafa amin'ny vondrona miasa sy ny fitantanan-draharaha.
Toy izany koa, ny Foundation dia nanomana pejy iray an'ny -bola, izay manondro ny fomba fizaran'izy ireo ny teti-bolany, ny rohy mankany amin'ny takelaka fidiram-bola / fandaniam-bola ary ny fanjifana taloha
Avy amin'ity varavarankely misokatra ity ny vondrom-piarahamonina, manasa anao izahay handray anjara amin'ity tetik'asa tena tsara ity, na inona na inona haben'ny fandraisanao anjara ara-toekarena, amin'ny fomba mitovy amin'izany, afaka manohana ny vondrom-piarahamonina OpenStreetMap amin'ny alàlan'ny fitaovany izahay, mandefa data, manova sarintany, mamorona torolàlana ary manome hahafantatra ilay fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » OpenStreetMap dia mila ny fanampianao hanohy tsy miankina